တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေး၊ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ရရှိ - Xinhua News Agency
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ပူးတွဲတိုက်ဖျက်ရေးအထိ ကိစ္စရပ်များစွာအပေါ် သဘောတူညီမှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သဘောတူညီချက်များနှင့် ရလဒ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှ ၁၂ ရက်အတွင်း လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ဝဲ) နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်က နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက အေးအတူ၊ ပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ထောင်ရန် ကြေညာပြီး တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယတွင် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာစေရန်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် ကုန်စည်ကူးပြောင်းမှု အတွက် “အမြန်လမ်းများ” နှင့် “အစိမ်းရောင်လမ်းများ” တိုးတက်မှုရှိစေရန် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။တရုတ်နှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာများ ကိုက်ညီစေရန်နှင့် တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံ၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနှင့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုန် စသည်တို့ ကို ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေးကဲ့သို့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ နှင့် တရုတ်-မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားနှစ် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်သို့ ရွှေ့ဆိုင်း ကျင်းပရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ညှိနှိုင်းမှုအခန်းကဏ္ဍတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တာဝန်ယူမှုကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ အပြာရောင်စီးပွားရေး (blue economy) ဆိုင်ရာ တရုတ်-အာဆီယံ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ တွန်းအားပေးကာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးများ ဆောင်ရွက်သွားရန် အသင့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်သည် လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (LMC) ငါးနှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် LMC ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ရန်နှင့် ရေအရင်းအမြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် အချက်အလက်လုံခြုံရေးအပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားကြောင်းနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တရုတ်-အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ထောင်မှုအတွက် တွန်းအားပေးထားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး၌ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ကိုင်တွယ်ခြင်းအပေါ် ထောက်ခံခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြား ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ဆောလျင်စွာ ပြန်လာနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ထောက်ခံလျက်ရှိသည်။
ဝမ်ရိ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်နှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံတို့သည် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ငါးနှစ်စီမံကိန်း၊ မန္တလေးနှင့် ကျောက်ဖြူ ချိတ်ဆက်ရထားလမ်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ခြင်း (feasibility study) နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဌာနစီမံကိန်း စတင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အခြားသော ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် ရလဒ် ၈ ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ လေးနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်သွားရောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြီးနောက် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘရူနိုင်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံများသို့ ဆက်လက်သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
NAY PYI TAW, Jan. 12 (Xinhua) — China and Myanmar have reached consensuses on an array of issues ranging from bilateral relations to the joint fight against the COVID-19 pandemic.
The consensuses and outcomes were achieved during Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi’s visit to Myanmar on Monday and Tuesday.
They agreed to cement anti-epidemic cooperation and improve the “fast tracks” and “green lanes” for personnel and goods movement.
China welcomed Myanmar’s assumption of the role of the country coordinator of China-ASEAN relations, and is ready to work with Myanmar to elevate the China-ASEAN relations, buildaChina-ASEAN partnership on blue economy, and strive to put into force the Regional Comprehensive Economic Partnership free trade agreement at the earliest possible date.
1- Myanmar President U Win Myint (R) meets with visiting Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi in Nay Pyi Taw, Myanmar, on Jan. 11, 2021. (Xinhua/Zhang Dongqiang)
2- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (L) meets with Myanmar’s State Counsellor and Foreign Minister Aung San Suu Kyi in Nay Pyi Taw, Myanmar, on Jan. 11, 2021. (Xinhua/Zhang Dongqiang)
Related Topics:တရုတ် -မြန်မာသဘောတူညီချက်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတ က တရုတ်နိုင်ငံမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု ခံယူ
တရုတ်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့မဟာဗျူဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးထိန်သိမ်းမှုဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာစာချုပ် ရေးထိုးခဲ့ခြင်းသည် အားကောင်းသော အာမခံချက်ကို ရရှိစေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား